Ọwa Suez | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Egypt, Ihe ị ga-ahụ
E nwere ọwa mmiri nke mmadụ wuru ụwa ma bụrụ ndị ama ama n'ụwa. Otu n'ime ha bụ Osimiri Suez. N’isiokwu nke taa, anyị ga-elekwasị anya na nke abụọ, the ọwa african nke gbanwere akụkọ azụmahịa nke mpaghara na ụwa.
Ọwa Suez esonyere Oké Osimiri Mediterenian na Osimiri Uhie ma na-ahụkarị dịka ókè dị n'etiti Eshia na Africa. Akụkọ banyere otu esi eche ya ma wuo ya n'enweghị esemokwu na esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mana ọgụgụ isi mmadụ mechara nwee ihe ịga nke ọma.
Ọwa a, kanaal n’osimiri, e wuru ya n’etiti narị afọ nke XNUMX imeghe uzo di n'etiti North Atlantic na Indian Ocean site Mediterenian na Oke Osimiri Uhie, na-ezere ịgagharị na Atlantic na akụkụ ndịda nke Oké Osimiri Indian, si otú a na-ebelata oge njem site na ọtụtụ puku kilomita.
Ọwa Ọ na-amalite na Port Said ma kwụsị na Port Tewfik n'obodo Suez. Na-eje ije ntakịrị karịa 193 puku kilomita ma o nwere uzo uzo di n’ebe ugwu na ndida. Mbido mbụ nwere otu mmiri mmiri, na-enweghị ọnụ ụzọ ámá, na mmiri mmiri na isi ụzọ na Ballah na Great Bittler Lake.
Na narị afọ nke XNUMX nnukwu alaeze ukwu Europe ka nwere ike n'Africa, ya mere ndi UK na France nwe ndi nwe yaHa dị otu a ruo ọtụtụ afọ, rue mgbe Agha nke Abụọ gasịrị, na usoro nke ichi obodo, onye isi ala Egypt n'oge ahụ, Nasser, kpebiri ime ka ọ mata ya. N'ụzọ doro anya, ọ nweghị ike ime ya na enweghị esemokwu, mana emechara ya n'ikpeazụ.
Site mgbe ahụ gawa, yana ịbịanye aka na nkwekọrịta, e kpebiri na a ga-eji ụgbọ mmiri ahụ mee ihe mgbe niile, n'oge udo na agha, n'ụgbọ ọ bụla n'ụdị ọ bụla, na-enweghị ọdịiche ọkọlọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ map nke Africa, ị ga-aghọta n'ezie ọwa dị mkpa maka esemokwu na mpaghara ahụ.
Afọ ole na ole gara aga, Na 2014, Egypt malitere ọrụ nke ịgbasa Ballah Pass na 35 kilomita iji mee ka mgbasa gbasaa ngwa ngwa na ikekwe ọbụlagodi ikike nke kanaal na ọnụ ọgụgụ ụgbọ mmiri nwere ike ịgafe kwa ụbọchị. Emere ya ma mepee ọrụ ahụ otu afọ ka e mesịrị. Ihe bụ ihe ọzọ, Na 2016, e meghere ọwa ọhụụ ọhụrụ.
Ma, ọ bụ oge mbụ ụmụ mmadụ wuru ụdị ihe ahụ? Mbanụ. O yiri ka ọ bụ n'oge ndị Ijipt oge ochie ka ọ dị n'echiche ịkwado njem site n'Osimiri Naịl ruo Osimiri Uhie. N'ihi ya, a kwenyere na ha wuru obere ọwa mmiri, ikekwe n'oge Ramses nke Abụọ na mgbe nke ahụ gasịrị, nke Daraịọs, eze Peasia mere.
Ndị Ottom lere ya anya, laa azụ na narị afọ nke XNUMX, na-achọworị ijikọ Mediterenian na Oké Osimiri Uhie, na ọchịchọ ijikọ Constantinople na ụzọ azụmahịa na njem njem.
Otú ọ dị, ọ dị oke ọnụ, n'ihi ya, ọtụtụ esiteghị na akwụkwọ ahụ. N'oge French mkpọsa ke Egypt na- Napoleon O nwere mmasi n'osimiri nke ochie kana ndị France na-ese ihe na ndị ọkà mmụta ihe ochie na-awagharị n'ala niile. Bụ eze ukwu gosipụtara mmasị dị ukwuu n'ịrụ ọwa mmiri ma iwu ọnụ ụzọ ámá mere ka ọrụ ndị ahụ dị oke ọnụ ma werekwa ogologo oge, yabụ na njedebe echiche ahụ gbahapụrụ.
N'ezie, echiche a wee bata n’uche ọtụtụ mmadụ oge wee rue na emezuru ya. Ka oge na-aga, ihe bịara dị njọ ma kpebie ya. Bụ ndị ụlọ ọrụ Suez Canal kwadoro ego, njikọ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ dabere na Paris. Na mbido, 52% nke mbak dị n'aka France na 44% n'aka Egypt, mana emesịa mba a rere ha na United Kingdom.
Ọwa wuru na Suez Isthmus, akwa mmiri dị n’etiti Africa na Eshia n’ihe gbasara ala dị nso ugbu a. A maara na tupu kọntinenti abụọ a abụo otu ihe, na n’agbata afọ 66 na 2.6, afọ gara aga, nnukwu nsogbu kpatara nkewa ha. Ọ bụghị otu ezigbo ogige, nwere nkụda mmụọ jupụtara na mmiri nke bụ Ọdọ mmiri Manzala, nke ọdọ ọdọ na Oké Osimiri.
Ala ahụ dị larịị nwere mmiri mmiri, aja na ajịrịja ajịja ndị a na-etinye n'oge mmiri ozuzo ma ọ bụ na-erute Osimiri Naịl ma ọ bụ nke ọzara na-efe efe nke ọzara wetara. N'ebe a ka emere mkpebi iwu ọwa mmiri, ọrụ ndị mere n'etiti 1859 na 1869. Afọ iri nke ihe e gwupụtara na ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'ike, ọtụtụ n'ime ha nwụrụ.
Ọ bụghị oru ngo na mbido welitere ọtụtụ olile anya ma mekwaa ka ọrịre baa oke. Ma aka na ezinụlọ Rothchild, ndị a ma ama na ndị ọrụ ego, mbak ọ dịkarịa ala na France mechara ree dị ka achịcha na-ekpo ọkụ. Ka ọ dị ugbu a, UK nwere obi abụọ ma na-ekwusi ike maka iji ndị ọrụ mmanye ego.
N'ikpeazụ, Ọwa Suez mepere na Nọvemba 1869 ya na emume a na Port Said nke gunyere oku, oriri na ndi ochichi. Dị ka a ga-atụ anya ya Na mbido, ọwa ahụ nwere nsogbu ụfọdụ metụtara ọrụaka na ego ebe ọ bụ na ego akwụgoro ntakịrị. Ọzọkwa, okporo ụzọ malitere n'ezie itolite afọ abụọ ka nke ahụ gasịrị, oge ahụ ejighị ọnọdụ n'aka.
Mana karia nsogbu na ntule nile bu eziokwu Ọwa Suez dị oke mkpa na kọntaktị n'etiti mba dị iche iche. N'oge ahụ ọwa ahụ bụ otu egwu dị ihe dị ka mita asatọ dị omimi na mita 8 n'obosara na n'etiti 22 na 61 obosara na elu. E wuru ụzọ ndị njem site na kilomita asatọ ruo iri iji mee ka ụgbọ mmiri si n'akụkụ nke ọ bụla gafere.
Ọ pere mpe ya mere na 1876 ha malitere ọrụ ọhụụ iji mee ka ọ saa mbara ma dị omimi. Ka ọ na-erule afọ 60 nke narị afọ nke 55, ọwa nwere opekempe obosara nke 10 mita na ala na mita 12 na mmiri na omimi nke mita XNUMX na obere mmiri. E mekwara ka ebe ndị ọzọ dịkwuo elu ma wuo ndị ọzọ na ọdọ mmiri ndị ahụ, jiri ihe na ihe nchara rụọ iji gbochie mbuze.
Emere atụmatụ ndị mechara bụrụ nke agha 1967 Arab na Israel, ụbọchị nke egbochiri ọwa mmiri ahụ n'agbanyeghị nkwekọrịta ejiri aka ogologo oge gara aga. Ọwa Suez anọghị arụ ọrụ ruo 1975 na dị ka anyị kwuru na mbụ, na 2015 Egypt mezuru ihe ohuru ohuru iji gbasaa ikike ya: Kilomita 29 dị ogologo karịa nke mbụ ya 164.
Iji mechaa m hapụrụ gị ụfọdụ ozi:
Na 1870, ụgbọ mmiri 486 gafere, ihe na-erughị abụọ n'ụbọchị.
Na 1966, nkezi nke ụgbọ mmiri 21.250 gafere, ihe dị ka 58 kwa ụbọchị.
Na 2018, ụgbọ mmiri 18.174 gafere.
Ọwa mbụ ahụ abụghị ụzọ ụzọ abụọ ka ụgbọ mmiri ga-akwụsị ma gaa, gaa, ma kwụsị. Ha mechara were ihe dị ka elekere iri anọ gafee, mana ka ọ na-erule 40, oge belatara ruo awa iri na atọ. Ka ọ na-erule ngwụsị nke 1939s e mejupụtara ndị convo na na 13s oge dị n'agbata elekere 40 na 70,
Ọdịdị nke ibu agbanweela ọtụtụ na ọkachasị na narị afọ nke XNUMX na mmanụ na mmanụ mmanụ bụ eze. A na-agbakwunye Kol, ọla, osisi, mkpụrụ na ọka, ciment, fatịlaịza.
Agbanyeghị na ụgbọ mmiri na-aga njem mgbe niile kemgbe 40, ọnụ ọgụgụ ahụ pere mpe nke ukwuu n'ihi asọmpi sitere na ụgbọ elu.
Taa ị nwere ike ịme njem site na Cairo ma ọ bụ Port Said, site na njem.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Egypt » Ọwa Suez